K2 | ရွှေ Web ကိုဆုပေးပွဲ
အားဖြင့် ဂွ | ဧပြီ 3, 2013 | ဆုချီးမြှင့် Winners |0မှတ်ချက်များ
အဆိုပါ K2 ပုံပြင်
K2 စတင်ခဲ့သည် 1998, ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်ထဲမှာ, တောင်အာဖရိက. ကောလိပ်ကျောင်းထဲကလတ်ဆတ်တဲ့လူငယ်နှစ်ဦး software ကို developer များဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်လွယ်ကူအောင်နှင့်စီးပွားရေးပြီးပြီခဲ့ပုံကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုရှိခဲ့တယ်. ထိုကတည်းက, K2 ငါးခုရုံးများနှင့်ကျော်နဲ့ဆုရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီသို့လာခဲ့သည် 500 ကမ္ဘာအနှံ့န်ထမ်း. K2 ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း applications များနှင့် tools တွေကိုနေရာတိုင်းမှာလူတွေကအောင်မြင်သောဖြေရှင်းချက်ဖန်တီးသွက်လက်တိုးမြှင့်ကူညီ. ထက်ပိုပြီး 1.5 ကျော်သန်းသည်အသုံးပြုသူများ 84 နိုင်ငံပေါင်း, အပါအဝင် 30 အဆိုပါ Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ရာခိုင်နှုန်းကို 100, ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ K2 အသုံးပြုနေသည်, အန္တရာယ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ဝင်ငွေကြီးထွား. K2 ခိုင်မာတဲ့ဘဏ္ဍာရေးကျောထောက်နောက်ခံရှိပါတယ်, ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ $150 မကြာသေးမီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်သန်း.
အသစ် K2.com ကျောက်သားကနေ K2 ရဲ့အိမျကို web အသင်းနှင့်မွန်ဒိုစက်ရုပ်များအကြားတစ်ဦးပူးပေါင်းခဲ့, CO. ဒါဟာအပြည့်အဝတုံ့ပြန်မှု site ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုရဲ့ features တွေကိုသရုပျဖျောဖို့ K2 ဖောက်သည်များနှင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်လက်ရေးဆွဲပုံကြမ်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံအသုံးချဖို့အားဖြင့် K2 အမှတ်တံဆိပ် revitalizes.